Faritra Analanjirofo: mikatso ny famatsiana entana | NewsMada
Faritra Analanjirofo: mikatso ny famatsiana entana
Voafetra ny fitaterana an-dranomasina, noho ny sakana ara-pahasalamana iadiana amin’ny Covid-19. Vao mainka nanampy trotraka ny haratsian’ny toetr’andro nandritra ny tapa-bolana teo, aty amin’ny tapany atsinanan’ny Nosy. Tsy afaka nihetsika teto amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ny sambo mpitatitra entana, mamatsy ny any amin’ny tapany avaratr’i Toamasina, tato anatin’ny tapa-bolana farany izao. Vokany, mikatso ny famatsiana ny entana andavanandro ilain’ny mponina. Maro amin’ny entana efa nampidirina tanaty sambo, saika vonona ny handeha, saingy tsy afa-nihetsika ka simba.
Sahirana ny mpanangona lavanila
Sahirana noho izany ny mponina any amin’ny distrika maro ao amin’ny faritra Analanjirofo, indrindra ny any Mananara Avaratra, i Maroantsetra ary i Sainte Marie, miankin-doha tanteraka amin’ny entana taterin’ny sambo avy aty Toamasina. Sahirana koa ny fitaterana an-tanety any amin’ireo distrika ireo satria tena ratsy ny lalana. Araka ny tatitra azo, tsy ahitana legioma intsony any an-toerana satria lany tanteraka ny tahiry.
Nanomboka nisy sambo afaka nitondra entana ihany ny alarobia 29 jolay teo, saingy tsy mbola naharaka amin’ny famatsiana any an-toerana. Tsy afaka niasa koa ny mpanjono any an-dranomasina, nandritra izay tapa-bolana naharatsy ny andro izay. Sahirana noho izany ny mpandraharaha mpanangona lavanila any amin’ny tantsaha.